Fotoan-tsarotra tsy mbola nisy toa azy
"Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao; ary hisy andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany; ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky." - Dan. 12:1.
Rehefa hifarana ny hafatry ny anjely fahatelo, dia hitsahatra tsy hanao fifonana ho an'ny olo-meloka ety an-tany intsony ny famindrampon'Andriamanitra. Efa vitan'ny vahoakan'Andriamanitra ny asany. Efa nandray ny "ranonorana farany" izy, dia ny "andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo", ka vonona hiatrika ny andro fizahan-toetra manoloana azy izy. Hivezivezy haingana mampitohy ny lanitra sy ny tany ny anjely. Hisy anjely avy ety an-tany hilaza fa vita ny asany; efa nampiharina tamin'izao tontolo izao ny fisedrana farany, ary izay rehetra hita fa nahatoky tamin'ny didin'Andriamanitra dia efa nandray ny "tombokasen'Andriamanitra velona". Amin'izany dia hajanon'i Jesôsy ny fanelanelanana ataony ao amin'ny fitoerana masina any ambony. Hanandratra ny tanany Izy sady hiteny amin'ny feo mahery hoe: "Vita" (...)
Rehefa mivoaka avy ao amin' ny fitoerana masina Izy, dia hisy haizina hanarona ny mponina eto an-tany. Mandritra io fotoana mampangorohoro io, dia tsy maintsy hivelona eo imason'Andriamanitra masina tsy misy mpanelanelana ny marina. Efa nesorina ny fefy nisakanana ny ratsy fanahy. Ary hanampatra ny fahefany amin'ny olona nikomy tsy nety hibebaka hatramin'ny farany i Satana. Mifarana ny faharipon'Andriamanitra. Nitsipaka ny famindrampony izao tontolo izao, nanamavo ny fitiavany sy nanitsakitsaka ny lalàny. Nihoatra ny fetran'ny fahasoavana ny ratsy fanahy; efa niala ny Fanahin'Andriamanitra, izay nikirizana hotoherina. Tsy manana ny fahasoavan'Andriamanitra ho fialofana izy ireo, ka tsy misy miaro azy intsony amin'ilay ratsy. Amin'izay i Satana dia handentika ny mponina eto an-tany ao amin'ny fahoriana lehibe farany. Rehefa hitsahatra tsy hihazona ireo rivotra masiakan'ny filana ambany eo amin'ny olombelona ny anjelin'Andriamanitra, dia hovahana izay rehetra mahatonga ny ady. Ho tratry ny faharavana mahatsiravina noho izay nihatra tamin'i Jerosalema fahiny ny tany manontolo.- HM, tt. 639,640.
Ireo izay madio tanana sy madio am-po ihany no hahajoro amin'izany andro fizahan-toetra izany. (...) Ankehitriny no fotoana mety, raha mbola mihazona ny rivotra efatry ny lanitra ny anjely, mba hahatonga ny fiantsoana sy ny fifidianana antsika ho azo antoka.- EW, t. 58